Indonezia, mampiroborobo ny bilaogy tsara, imailaka feno fankahalàna ary ny Lokan’ny Biloagy Azia Blog Awards …………………. Fampitomboan’i Indonezia An’ireo Blaogy Tsara, Ireo Imailaka Mifono Fankahalàna Ary Ireo Blaogy Fanolorana An’i Azia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2019 11:55 GMT
Tao anatin'ireo taona roa farany, vavolombelon'ny firoboroboana tsy mitsahatra sy mahavelom-panantenan”ireo blaogy tsara sy ireo blaogera malaza mila amporisihana ny tontolombolongana Indoneziana. Ny anton'io, amin'ny ankamaroany, dia nohon'ny fitobak'ireo manampahaizana, mpanoratra ary mpanao gazety Indoneziana izay manomboka mampiseho ny fahalinan-dry zareo amin'ny blaogy. Manana blaogera tsara vitsivitsy naseho tao anatin'ny blaogera Indoneziana tamin'ity herinandro ity aho.
Yosef Ardi , ohatra, izay niblaogy tsy tapaka mikasika an'ireo indoneziana manankarena sy manana ny maha-izy azy manokana (VIPs), dia nanambara tao anaty blaogin'i Enda indra mandeha fa naharay “fitarainana” avy amin'ireo vondron'orinasa telo noho ireo lahatsoratra navoakany.
Raha niteny taminay i Indonesia Anonymus, sady mpanao gazety toa an'i Yosef Ardi ihany koa, fa vao avy naharay imailaka 127 mifono fankahàna izy, misy adiresy sy votoaty samihafa, nefa inoany fa avy amina olona iray ihany izy ireo na fikambanana iray ihany, raha ny fahitàna azy dia avy amina mpikambana iray anatina fikambanana mpikatroka. Naveriny nalefa ireo imailka feno fankahalàna taorian'ny nandikàny azy tamin'ny teny anglisy. Marobe ireo fanehoankevitra maneho fangorahana sy fanohanana tamin'ilay “lahatsorarany imailaka feno fankahàna“. Indreto ny sasantsasany tamin'izany.
Martin Manurung, iray amin'ireo blaogera vaovao hendry vao nipongatra, no manasongadina ny firehana ankehitriny amin'ny politika Indoneziana izay, heveriny fa mirona kokoa miankavanana (vakio, ny fifikiran'ny finoana amin'ny nentindrazana). Tohanany amin'ny tabilao maneho ireo vokatry ny fifidianana tamin'ny taona 2004 ny fanadihadiany, mifototra amin'ireo ideolojian'antoko politika, izay hanome ho an'ireo mpamaky azy sary iray mazava kokoa mikasika ny fironana ankehitriny eo amin'ny lafiny ara-politika ao Indonezia. Izy, sy isika rehetra koa, dia miahiahy mazava ho azy raha toa mitombo ny fironana ara-politika ankehitriny ao Indonezia, manokana amin'izany ny lafiny eo amin'ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra raha toa ka mifidy ho an'ireo antoko ankavanana ireo Indoneziana mandritra ireo fifidianana solombavambahoaka sy ireo fifidianana isam-paritra ho avy.
Eny, miaraka amin'ireo fitomboana tsara sy ireo blaogy tsara kalitao, heveriko fa i Jakartass, izay sahirana ankehitriny amin'ny maha mpitsara azy ao anatin'ny Asia Blog Awards Indonesia dia hihetsi-po mahita ilay bilaogy tsara kalitao mihamitombo ary, miaraka amin'izay, sahiran-tsaina hifantina iray avy amin'izany.